Home Wararka Warsaxafadeed ay soo saaren Xil. Beesha D&M (Akhriso)
Warsaxafadeed ay soo saaren Xil. Beesha D&M (Akhriso)
Shir deg deg ah oo xildhibaanada Digil-Mirifle ay ka yeesheen xaalada Cirka isku sii shareeraysa ee ka taagan Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayey kasoo saareen war-saxaafadeed ka kooban sagaal qodob. Hoos ka aqriso warsaxaafadeedka.
Previous articleMaxaa ka soo baxay kulankii wakiilada beesha caalamka iyo MW. Farmaajo? (Xog Muhiim ah)
Next articleC/raxmaan C/shakuur oo si qiiro leh uga hadlay Dhacdadii Maanta lagu joojiyay Xaflad uu qabsan lahaa!!
Sidee loo Qariyaa Fashilka Shirka Jibuuti?
MW Trump oo looga adkaaday ololaha doorashada Mareykanka